Mayelana Nathi - XGEAR
Sihlose ukuba umsunguli kanye ezemidlalo kanye negiya langaphandle brand top.
Umatasatasa ulungiselela ukuphila, kodwa ungalokothi uphile?Qhubeka manje!
Imishini yezemidlalo nokufaneleka, uhlobo lwemidlalo yamanzi, igiya lasendlini nelangaphandle, i-XGEAR inakho konke nje ongakufisa.
Igxila kukho konke okuhlangenwe nakho futhi inesibindi sokudabula, i-XGEAR ihlala ilungele ukuhlola okungaziwa nokwamukela izinselele.Sithuthukisa, siklama, sikhiqiza futhi sikhangisa ezemidlalo ezintsha neziqanjiwe kanye namagiya angaphandle, futhi sizibophezela ekukhuthazeni impilo enhle nethemba elihle.
Noma nini lapho uzithola usohlangothini lweningi, yisikhathi sokuma ucabange.Hamba uthole igiya elilungile ku-XGEAR, futhi uvule umhlaba wakho ukuze uthole amathuba amasha.
I-XGEAR iwuphawu olukhula ngokushesha, sisebenzela zonke iziteshi zamakhasimende okuhlanganisa ukuthengwa kwamaqembu omphakathi, umgqugquzeli wenkundla yezokuxhumana, umholi wemibono eyinhloko, i-E-commerce, ukudayisa, i-OEM, ukusatshalaliswa nomthengisi.Imikhiqizo yethu isifinyelele eMelika, eYurophu, eJapan, e-Australia nasemhlabeni wonke.Yiba umlingani nathi, futhi singakwazi ukusiza ibhizinisi lakho likhule.
Izindlu zokugcina izimpahla ezimbili e-United States, enye i-Los Angeles, kanti enye ise-Wisconsin, i-inventory egcinwe kahle ehlinzeka ngezixazululo ze-warehousing kanye ne-logistics, ngakho-ke kokubili ukungenisa okuqondile ngomkhumbi kanye nomkhumbi womkhumbi wangaphakathi kuyatholakala, okunikeza amandla kumakhasimende ethu.
Amaqembu asebenzayo ahlinzeka ngamaphakheji anenani elincintisanayo, ahlanganisa uhla lwemikhiqizo ebanzi, ukwabelana ngolwazi lokumaketha, ukwesekwa kokwethulwa nokubuyekezwa, ukwakhiwa nokuthuthukiswa komkhiqizo, izincazelo zekhwalithi yomkhiqizo, ukusekelwa kokupakisha, ukwesekwa kokuthengisa, ithimba lesevisi yamakhasimende, indawo yokugcina impahla, ukupakisha nezixazululo zempahla, ukuzinikela okuzinikele. ithimba lokuthumela imikhumbi elakhelwe ukuba noshintsho olusheshayo ngesikhathi sokuphendula kuzo zonke izinkinga namathuba.
Ifakwe uhlelo lwe-Oracle NetSuite, i-ECCANG ERP futhi inenkontileka ne-SPS commerce.Amasistimu ethu athuthukile nezinqubo asebenzise ubuchwepheshe bakamuva nokuphatha futhi azi ukuthi ungayihambisa kanjani imikhiqizo yakho ngokushesha nangendlela eyongayo.